R.W Hore ee Soomaaliya Abdiwali Gaas oo Oslo buug kusoo bandhigi doono. - NorSom News
R.W Hore ee Soomaaliya Abdiwali Gaas oo Oslo buug kusoo bandhigi doono.
Sawirka: Abdiwali Gaas oo booqasho ku joogo Oslo, xili uu RW ahaa. Foto: ANETTE KARLSEN/SCANPIX
Reysulwasaarihii hore ee dowladii Kumeel gaarka aheyd ee Soomaaliya, Abdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa maalinta sabtida ah magaalada Oslo kusoo bandhigi doono buug uu ka qoray dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee dhacay xiligii uu xafiiska joogay iyo marxaladii ay ku sugneyd dowladnimada Soomaaliya, xiligii uu reysulwasaaraha ahaa.
Abdiwali Gaas oo madaxweyne ka noqday maamulka Puntland ee Soomaaliya, ayaa buugiisa ugu magac daray “Caqabadihii kalaguurka Soomaaliya.” (A Challenging Transition in Somalia). Wuxuuna horey horey buugan ugu soo bandhigay magaalooyinka waaweyn ee soomaalidu ay ku badantahay caalamka.
Soo bandhigista buuga uu qoray Abdiwali Gaas ayaa sabtidan ka dhici doonto Hoolka shirarka hotellka Ankar Hotell, waxaana wixii faah-faahin ah ka arki kartaa sawirka hoose.
Previous articleMuhiim: Sharciyadan ayaa dhaqan-gali doono sanadka cusub ee 2020.
Next articleNorway oo ugu danbeyn dhaqan-galisay in qofku uu laba jinsiyad isku heysan karo.